PressReader - Isolezwe: 2017-10-12 - Kutholwe ikhanda lowesifazane esigangeni
USHAQEKILE umphakathi wakwaNjobokazi, eHammarsdale ngemuva kokutholwa kwekhanda lowesifazane ongaziwa esigangeni, izolo emini.
Okhulumela amaphoyisa KwaZuluNatal, uCaptain Nqobile Gwala ukuqinisekisile ukuthi kutholwe ikhanda lowesifazane elingaziwa kule ndawo kodwa uphenyo lwamaphoyisa lusaqhubeka. “Ngo-12 namhlanje (izolo) kutholwe ikhanda lowesifazane iminyaka yakhe elinganiselwa kwengu-30. Leli khanda alaziwa okwamanje ukuthi ngelikabani kodwa kunophenyo oluqhubekayo. Amaphoyisa asebenza ngezinja aphuthume kule ndawo ukuyobheka isidumbu kodwa besingakatholakali,” kusho uGwala.